मार्टिन भ्रिजल्याण्ड अब उपलब्ध छ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	25 सेप्टेम्बर 2019 मा	•5टिप्पणिहरु
हालसालैका वर्षहरूमा मलाई प्रायः सोधिन्थ्यो कि म किन पुस्तक प्रकाशित गर्दिन। मलाई थाहा थियो कि पुस्तक आउँदैछ, तर तस्विर अझै तयार भैरहेको छ। यो उत्तम रूपमा तपाईको फोन वा कम्प्युटरमा फाईल डाउनलोड पूर्ण हुने प्रतीक्षामा वर्णन गरिएको हुन सक्छ। सबै जानकारी प्राप्त गर्न यसले केहि समय लिन्छ। मलाई कहिलेकाँही सोधिन्छ जहाँ म सबै ज्ञान प्राप्त गर्दछु। उदाहरण को लागी, व्यक्तिहरु को सुझाव छ कि म शायद धेरै पढ्नु पर्छ। यद्यपि, मैले मुख्य धाराका मिडियाका (नकली) समाचार वस्तुहरू बाहेक सम्भव भएसम्म पढें, किनकि म सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बजाएको र कार्यक्रम गरेको विधिहरू औंल्याउन वर्तमान घटनाहरू प्रयोग गर्छु।
हामीले वास्तवमै थाहा पाउनु पर्ने सबै चीज दिमागमा आउँदैन, तर हाम्रो वास्तविक चेतनाबाट आउँदछ। यसैले मैले माथिको डाउनलोडसँग तुलना गरें।
"वास्तविकताले हामीले बुझ्यौं" यसले वर्णन गर्छ कि हामी बस्ने संसार र ब्रह्माण्डको संरचना कसरी छ। यो लेखको एक ठूलो संख्याको विस्तृत र संरचित अनुवाद हो जुन मैले यस वेबसाइटमा यस बारेमा लेखेको थिएँ। स्पष्ट शब्दहरूले सबै उमेरका लागि यो एक सुन्दर पुस्तक बनाउँदछ। पुस्तकले कुनै पनि धार्मिक वा आध्यात्मिक खोजीहरू हटाउँदैन, तर हामीले सामना गर्ने सबै समस्याहरूको समाधानको बारेमा स्पष्टता प्रदान गर्दछ। धेरै आध्यात्मिक वा धार्मिक नेताहरूले तपाईंलाई निश्चित दिशामा पठाउँछन्, र अधिक प्रश्न चिन्हहरू पनि खडा गर्दछन्, ताकि तपाईं अझ पक्का र निश्चित हुनुहुन्न। केहि सामान्यतया gnaws। म विश्वस्त छु कि यस पुस्तकले कुनै पनि प्रकारको शंका हटाउनेछ र निश्चित गर्दछ कि तपाई अन्तत: तपाई कहाँ हुनुहुन्छ र कसरी सजिलो हुन्छ तपाईले बुझ्नु भयो।
किनकि मैले एक फाउन्डेसन स्थापना गरें जहाँ म प्राय: यस साइटको लागि लेख्ने गर्छु, म तपाईंलाई पुस्तक बिक्री गर्न सक्दिन। त्यो एक व्यावसायिक गतिविधि हुनेछ। यसैले यस वेबसाइटको लागि वार्षिक सदस्यता लिने बित्तिकै म तपाईंलाई उपहारको रूपमा पुस्तक प्रस्ताव गर्दछु। अब केही अवस्थित दाताहरूले सोच्नेछन्: "ओह, म नि: शुल्क किताब चाहान्छु"। जहाँसम्म, म शून्य बाहिर मुद्रण र शिपिंग लागत तिर्न सक्दैन, यो तपाईं मात्र एक नयाँ वार्षिक सदस्यता बाहिर लिनुभयो भने मात्र सम्भव छ। त्यस्तो सदस्यता वास्तवमा चन्दा हो। तपाईंको उपहारको साथ म किताबको प्रिन्टि and र शिपिंग लागतहरू भुक्तान गर्न सक्दछु। तल तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ पुस्तक कस्तो देखिन्छ।
यसले कसरी काम गर्दछ तपाईं 'थिच्नुहोस्सदस्य बन्नुहोस्, त्यसपछि एउटा छनौट गर्नुहोस् वार्षिक सदस्यता वा उच्च। तपाईं पहिले नै एक हुनुहुन्छ वार्षिक सदस्यता € 25 को लागी। प्रणालीले स्वचालित रूपमा मलाई तपाईंको वार्षिक सदस्यता मलाई पठाउनेछ, ताकि म तपाईंलाई ईमेल पठाउन सक्दछु जुनमा म तपाईंलाई शिपिंग ठेगाना अनुरोध गर्दछु। त्यो जानकारी म द्वारा भण्डारण गरिएको छैन र यो केहि पनि हुनेछैन, यो बाहेक यो तपाईलाई पुस्तक पठाउन प्रयोग गरिन्छ। वार्षिक सदस्यताको साथ तपाईं वास्तवमा एक बर्षको लागि दाता बन्नुहुन्छ र तपाईं मेरो कामलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ताकि म जारी राख्न सक्दछु।
यस पुस्तकको अपेक्षित पहिलो संस्करण र वितरण यस वर्ष नोभेम्बरमा हुनेछ। जे होस्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं तुरुन्तै सदस्य बन्नुहोस्, किनकि सबै कुरा प्रिन्टि and र शिपिंग लागतहरू पूरा गर्न सक्षम हुनुमा सम्बन्धित छ। तपाईंको सदस्यता दान संग तपाईं लगातार यो वेबसाइट र मेरो व्यावहारिक लागतहरूको लागि मेरो कार्यको समर्थन गर्नुहुन्छ।
ट्याग: पुस्तक, de, को, विशेष, मार्टिन, नि: शुल्क देश, बुझ्दछन्, we, वास्तविकता, जस्तै
25 सेप्टेम्बर 2019 मा 07: 38
पुस्तक पाउनको लागि मसँग पहिलो पटक 'ग्राहकको वार्षिक सदस्यता' थियो, तर म कल्पना गर्न सक्दछु कि यो धेरैका लागि धेरै नै हो। यसैले मँ अब वार्षिक वार्षिक सदस्यता सहित पुस्तक प्रस्तुत गर्दछु। त्यसोभए पक्कै पनि केहि बाँकी छ, तर सबै पछि यो मेसेन्जरको बारेमा छ।
29 सेप्टेम्बर 2019 मा 09: 58
के यो डिजिटली रूपमा पुस्तक एक e-book को रूपमा बेच्नको लागि विचार हो? मलाई लाग्छ कि bol.com को साथ सम्भव छ।
म निश्चित रूपमा तपाईको पुस्तकलाई अर्डर गर्दछु, म उत्सुक छु कि सामग्रीहरू तपाईसँग भएका लेखसँग कसरी सम्बन्धित छ।
यो सम्भवत तपाइँको लेखसँग मिल्नेछ, तर अधिक विशिष्ट र थप विस्तृत?
5 अक्टोबर 2019 मा 12: 40
सदस्यता बन्द छ।
खैर म अझै एक जिज्ञासु प्रश्न छ। तपाईले नियमित रूपमा वर्णन गर्नु भएको छ कि हालको मामिलामा अनुसन्धान र लेख लेख्न र सामान्य अस्तित्वको साथसाथै, एकै समयमा पुस्तक लेख्न लगभग असम्भव छ। तपाइँ त्यो कसरी गर्न प्रबन्ध गर्नुभयो?
6 अक्टोबर 2019 मा 12: 49
तपाईले याद गर्नु भएको छ, यसैले म कम लेख लेख्छु ताकि म त्यसका लागि समय खाली गर्न सक्षम भएँ।
पिटर वेस्टरहाउट लेखे:
16 अक्टोबर 2019 मा 14: 28
म किताब को बारे मा धेरै उत्सुक छु
« ग्रेटा थुनबर्गले संयुक्त राष्ट्रसंघीय भाषणलाई इराक युद्धमा "इन्क्युबेटरबाट बाहिर फालिएका बच्चाहरू" को सम्झना गराउँछ
पोप फ्रान्सिसले विश्व नेताहरूलाई भ्याटिकनमा एक्सएनयूएमएक्समा मे एक्सएनयूएमएक्समा वैश्विक सम्झौताको लागि बोलाउँदछन् »
कुल भ्रमण: 16.851
विश्लेषण गर्नुहोस् op नेटफ्लिक्स 'महामारी: कसरी प्रकोप रोक्न सकिन्छ' युनिभर्सल भ्याक्सिन सुपरहमान -२.० को विज्ञापन अभियान?
SandinG op कोरोना भाइरस, नगद को उन्मूलन को लागी छोटो कटौती र विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावहरु